WAA MAXAY NOOCYADA YAANYADA UGU WANAAGSAN EE LAGU BEERAY URAL IYO MARKA: DIB U EEGIS KU SAABSAN BEELAHA LA GOOSTO GOOSASHADA, IYO SIDOO KALE BEERISTA YAANYADA EE LAGU KORIYO IYO BEERTA FURAN - BEER CAGAARAN
Xilliga xagaaga ee Ural waa mid gaaban, sidaas darteed waa mid aad u adag in ninkii beerta caadiga ah si ay u koraan yaanyada sida meel.
Tilmaamaha cimilada ee Ural waa in lagu tixgeliyaa xulashada noocyada beeritaanka, iyo sidoo kale inta lagu jiro beerista yaanyada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si fiican u daryeesho khudradda, xitaa xaaladaha adag ee cimilada, waxaad heli kartaa dhalidda sare ee miraha caafimaad leh dhadhan fiican. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa xulashada noocyo kala duwan oo tamaandheyn ah iyo dareenka ka soo baxa khudradda.
Dhamaan sifooyinkaas oo dhan waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin meesha juqraafi ah ee degaanka. Gobolka wuxuu ku yaalaa meel ka fog badda, qoto dheer ee qaaradda. Cimilada Ural waa qulqulo, isbedel aad u weyn, roobab aan si siman loo qaybin. Cimiladu waxay u egtahay in ay isbedesho xawaare aad u sareysa. Taasi waa, hal maalin waxay roobab u dumin karaan, dabaysha oo bilaabi doonta dabayl xoog leh, iyo xilliyada u dhexeeya isbedelka cimilada qorraxdu way dhalaalaysaa.
Xilliga xagaaga, isbeddelka heerkulka ayaa si gaar ah loogu dhawaaqaa Ural. Qeybta koonfureed ee gobolka waqtigan ayaa heerkulka kor u kici karo 25 darajo Celsius, halka qaybaha waqooyiga heerkulka hawada wuxuu gaaraa lix heerka Celsius. Xaqiiqada waa in la tixgeliyaa inta lagu jiro beerista yaanyada.
Caawin Xagga xagaaga ee qaybta koonfureed ee degaanka lagu sharraxay waxay socotaa ilaa 5 bilood, wax walba oo kale waa jiilaal, woqooyiga wax kasta way ka duwan yihiin: xagaaga wuxuu soconayaa oo keliya laba bilood, xilliga jiilaalka oo dhan waa 10.
Agronomists leh waayo-aragnimo weyn ku talinaynaa in la siiyo doorbidyo noocyo in ay u adkaystaan ​​xaaladaha aan fiicnayn, aan qabin xaaladaha sii kordhaya, iyo sidoo kale noocyo of yaanyada kuwaas oo hore u Bisaylkiisa. Bannaanka u ku talinaynaa in ay fiiro gaar ah u leh noocyada soo socda.
Waqooyiga xagjirka ah
Waxay u koreysaa dhererka ilaa nus mitir. Xilliga Biyaha ayaa ah 3-3.5 bilood. Tilmaamaha dibadda: midabka midhaha cas waa guduud, waa qaab wareegsan, cufan, miisaanka celcelisku wuxuu gaaraa 80 grams. Faa'iidada ugu weyn ee xayawaanka waa bislaanshaha hore iyo simanba ee miraha.
Dhinaca dhererka qiyaastii 50 sentimitir. Tilmaamaha tamaandhaynta: midab casaan, adag oo taabasho ah, qaabab isku dhafan oo leh finan dareen leh. Miraha waxay u bislaadaan 3 bilood. Wuxuu gaari karaa tiro dhan ilaa 250 garaam. Faa'iidada ugu weyn waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhadhan iyo dhalid sare.
Heerkuna wuxuu la mid yahay noocyada hore - 45 sentimitir. Miraha si buuxda u bislaadaan in ka yar saddex bilood. Xogta dibedda: midabka tamaandhadu waa casaan cad, qaabkuna waa wareegto caadi ah, mid aad u fiicani, wuxuu ku koraa miisaanka 80 gram. Faa'iidooyinka: iska caabinta cudurada kala duwan iyo crack.
Noocani waa wax yar ka yar inta ka hartay - kaliya 30 sentimitir. Ripens in 3.5 bilood. Sida laga soo xigtay sharaxaad, yaanyo cabirkiisu yahay casaan, fareeshka, wareegsan. Miisaanka waa qiyaastii 100 garaam. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah soo bandhigid aad u wanaagsan, iyo ilaalinta wakhti dheer, difaacid dhamaadka abaarta.
In height dherer ilaa ilaa nus mitir. Wakhtiga uu bislaado waa 85 maalmood. Miisaanka miro waa 50 garaam oo keliya. Midabka tamaandhada ah waa mid casaan ah, wareeg ah, qaab muuqda leh waa maqnaanshaha meel ku taal asliga ah. Faa'iidooyinka kala duwan ee - Bisaylkiisa aad u dhakhso badan.
Dhererka dhererka - 50-60 sentimitir. Waqtiga da'diisu waa saddex bilood. Miraha waa yar yihiin, miisaankoodu yahay ilaa 25 garaam, midab casaan, qaabab wareegsan. Faa'idada - iska caabinta cudurada iyo cayayaanka.
Dhirta dhirta - 0.6-0.7 mitir. Tamaandho waxay kobcaan celcelis ahaan saddex bilood. Midabka miro ayaa aad u dhalaalaya, miisaanka wuxuu gaaraa 100 garaam. Faa'iidooyinka kala duwan: difaaca jirooyinka iyo dulqaad fudud oo xaaladaha cimilada xun.
Goormaa yihiin taariikhaha beerto yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo iyo dhulka hoostiisa?
Tamaandhada waa dhaqan aad u kulul, sidaas darteed, waxaa suurtogal ah in ay ku beeri geedo ee aqalka dhirta lagu koriyo oo kaliya in si joogto ah loo qeexay. Hoyga lagu koriyo oo aan kululayn waa in aysan dhicin bilihii May. Shuruudaha beerto ee aqalka dhirta lagu koriyo - ma ahan mid ka horeeya badhtamaha April.
Si aad u kobciso yaanyada laga bilaabo abuurka Urals waxaa loo arkaa mid aan habooneyn. Waxaa fiican in la gooyo beeritaanka caadiga ah ee tamaandhada ee gobolka this - geedo (oo ku saabsan ishortaagga geedo yaanyo sii kordhaya ee Shiinaha, halkan ka akhri, iyo maqaalkani waxaad ku baran doontaa habka aan la soo qaadin ee abuurka abuurka).
Sida beeritaanka yaanyada ee dhulka u furan, xaaladaha cimilada ee Ural ma aha mid ku haboon nidaamkan, maadaama tamaandhada loo tixgeliyo dhaqanka thermophilic. Cimilada hawada kama fogaan karto gobolkaas. Intaa waxaa dheer, ciidda ma haystaan ​​wakhti ay ku diiriyaan heerkii ugu fiicnaa. Laakiin haddii aad weli go'aansato in aad fursad u hesho oo yaanyo ku beeraan dhulka banaan, waxa fiican inaad ka sameysid qaybta labaad ee Juun.
Wixii beeritaanka aqalka dhirta lagu koriyo waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato mudadaas marka ciidda loo kululeeyo ilaa 20 sentimitir qoto dheer si ay ugu yaraan tahay 13 darajo Celsius. Xaaladda heerkulka hooseeya, xididdadu ma awoodi doonaan inay soo nuugaan qadar ku filan qoyaan, sidaas darteedna ma awoodaan inay si buuxda u horumaraan.
Ka hor inta laga beerto, waa inaad ka taxadartaa lakabka dufanka wanaagsan, maxaa yeelay yaanyada uma dulqaadanin qoyaanka taagan.
Marka xigta, u diyaari jeexjeexyada fogaan ah 0.5 mitir midba midka kale.
Furrow kasta waxay u baahan tahay in la waraabiyo xal daciif ah oo ah kaneecada, oo lagu rusheeyey dambas iyo wax yar oo superphosphate ah.
Waa muhiim. Marnaba ma ku dari kartaa humus dhulka, sababtoo ah kiiskan waxaad heli doontaa duurka xooggan oo leh tiro yar oo ah miraha.
Dhamaanteen waan ognahay in Siberia aysan sidoo kale dadka degaanka u jecelyahay xaalado cimilo heer sare ah. Sidaa darteed, gobolka this ma fududa ma aha oo kaliya in ay ku noolaadaan iyo shaqeeyaan, laakiin xitaa si dheeraad ah si ay u koraan dalagyada beerta. Waxaan kugula talinaynaa in aad naftaada ku barato qalabkayaga ku saabsan beeritaanka yaanyada ee gobolka, iyo sidoo kale faa'iidada iyo qasaaraha yaanyada sii kordhaya ee guriga ku leh dheryaha.
Xusuuso in habka ugu habboon ee lagu kori karo warshad waa in la beero yaanyada geedo. Habkani wuxuu kaa caawinayaa helitaanka midho wanaagsan oo caafimaad leh. Laakiin taasi waa inaad raacdaa xeerarka beerashada:
15 maalmood ka dib sii kordhaya geedo si meel joogto ah, geedo waa in la xirxiraa, iyo "kore" waa in laga saaro, tegaayo oo kaliya kareeraha, 2-3 sentimitir sare.
Ka hor inta yaanyada bilaabaan inay ubaxyada iyo soo rogo miraha, waxaa haboon in waraabiyo dalagga wax ka badan hal jeer toddobaadkii.
Haddii cimiladu aad u qallalan tahay, inta badan waa in la kordhiyaa waraabinta. Isla waa in la sameeyaa kiiska marka miraha ugu yar uu bilaabmayo.
Haddii qoyaanku uusan ku filnayn, waxaa jira fursado ah horumarinta kalluunka sare, qadarka xad-dhaafka ahi wuxuu sababi karaa nidaamka xididka oo idil.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoyo ciidda oo kaliya nidaamka xididka, waqtiga ugu haboon waa subaxa ama ka dib qorrax dhaca.
Waqtiga horumarka iyo koritaanka firfircoon ee yaanyada waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo bacriminta dareeraha, tusaale ahaan, mullein ama quudin adag oo diyaarsan. Hubi in bacriminta uu leeyahay qadar ku filan oo ah potassium iyo magnesium, haddii kale sababtoo ah la'aanta cagaarka cagaaran ayaa laga arki karaa yaanyada. Bacriminta noocan oo kale ah waxaa la isticmaalaa laba jeer bishii.
Si loo kordhiyo tirada ugxan iyo miraha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhaqanka xalka boric acid (10%) labadii toddobaadba mar.
Sida ugu dhakhsaha badan ugxan-kiciyeyaasha ugu horreeya waxay ka muuqdaan tamaandhada, waa lagama maarmaan in laga saaro taarikada hoose ee caleenta, gaar ahaan kuwa ku xiran dhulka - waxa ugu wanaagsan in la sameeyo habka noocaas ah ee saacadaha subaxda qorraxda, sidaas darteed nabarradu waxay yeelan doonaan wakhti ay ku jiidaan fiidkii.
Dhowr jeer oo xilli ah, geedka waa in lagu daaweeyaa daawooyinka insecticidal iyo fungicidal sida tallaabo looga hortago cudurada iyo weerarka cayayaanka.
Carrabku waa inuu ahaado mid aan biyuhu lahayn oo neefsan, bacrimiya.
In ciidda waa ugu fiican in lagu daro ciid yar oo madow iyo ciid webiga weyn.
Digniin! Fiisooyinka Fikradaha ah kuma talinayaan yaanyada sii kordhaya ee isla dhismaha ciidda muddo saddex sano ah. Inta lagu jiro muddadan, dhammaan nafaqooyinka iyo nafaqadu way ka baxaan dhulka, marka laga reebo dulin iyo cuduro kala duwan.
Sida laga soo xigtay Fiisooyinka Ural, Qalabka muhiimka ah ee tayada yaanyada waa tayada ilaalinta miraha iyo kartida gaadiidka. Laakiin waxaa habboon in la ogaado in midhahaas oo la keydin karo waqti dheer, had iyo jeer ma laha dhadhan fiican.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad doorbidid noocyadaas kuwaas oo u adkeysanaya horumarinta cudurrada iyo xaaladaha aan fiicnayn. Sidaa daraadeed, ha iloobin inaad dhaqangeliso xalalka khaaska ah, tusaale ahaan, sida "Epin" iyo "Zircon".
Si ay u koraan wax khudradda ah ee gobolka oo leh cimilo aan caqli gal ahayn waa mid aad u adag. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal iyo waqti badan si aad u hesho dhalid sare. Hase yeeshee, awoodda aad u korto yaanyada goobtaada adigoo kalsooni ku qaba sifooyinkoodu waa qaali.